ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ (တရားဝင်အမည်အားဖြင့် ကာဂျစ်သမ္မတနိုင်ငံ) အား ယခင်က ကာဂျစ်ဇီးယားဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကာ အာရှ အလယ်ပိုင်းတွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး တောင်ကုန်းထူထပ်ကာ မြောက်ဘက်တွင် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့က ဝိုင်းရံထားသည်။ အကြီးဆုံးမြို့နှင့် မြို့တော်မှာ ဘီရှကက်မြို့ဖြစ်သည်။
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများကို တပ်လှန့်လိုက်သည့် လှုပ်ရှားမှုမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကာဂျစ္စတန် တောင်ပိုင်း အဓိကရုဏ်း အတွင်း ထင်ရှားသော ဥဇဘက် ဘာသာရေး နှင့် လူမျိုးရေး ခေါင်းဆောင်များကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထင်ရှားသော သတင်းစာ ဆရာ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ အဇင်ဇန် အက်စ်ကာရော့ဗ် သည်လည်း တစ်ဦး အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။  ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကာဂျစ် လွှတ်တော်မှ အသက် ၂၃ နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများအား မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ မပါဘဲ ပြည်ပသို့ တစ်ဦးတည်း ခရီးသွားခြင်းကို တားမြစ်သည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို မြှင့်တင်ရန် နှင့် မျိုးရိုးဗီဇကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် ဆိုသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကာဂျစ္စတန် ဥပဒေပြုသူများက "ရိုးရာမဟုတ်သည့် လိင်မှုဆက်ဆံရေးကို အကောင်းဘက်မှ လှုံ့ဆော်ခြင်း" ကို ဖန်တီးသည့် လိင်တူ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူနှင့် သတင်းစာ ဆရာများကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်သည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းသည့် အခါတွင် အမေရိကန် သံတမန်များက စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားနယ် နှင့် နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ်[ပြင်ဆင်ရန်]
အလယ်အာရှတွင် ရှိသော ယခင် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတနိုင်ငံများတွင် ရုရှား ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာ စကား အဖြစ် အသုံးပြုသော နိုင်ငံ ၂ ခုသာ ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ကာဂျစ္စတန် နှင့် ကာဇက်စတန် နိုင်ငံတို့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်မှ ကာဂျစ်ဘာသာ စကားကို ရုံးသုံးဘာသာ စကား အဖြစ် ထပ်မံပြဌာန်းပြီး ရုံးသုံးဘာသာစကား ၂ခု သုံးသော နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူဦးရေ အများဆုံး ဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် ကာဂျစ္စတန် လွှတ်တော်မှ ဥပဒေတစ်ခုကို တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ထိုဥပဒေအရ ဘာသာတရားကို အသိအမှတ် ပြုရန် အနည်းဆုံး ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ ဦးရေ ကို ၁၀ ဦး မှ ၂၀၀ ဦးသို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဘာသာကူးပြောင်းရန် အတင်းအကြပ် ကြိုးစားခြင်းကို ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းများတွင် ဘာသာရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို တားမြစ်ခဲ့ကာ မှတ်ပုံတင်မထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း တားမြစ်ခဲ့သည်။ သမ္မတ ကူးရ်မန်ဘတ် ဘာကီးယက်ဗ်မှ ထိုဥပဒေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သည်။
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ထားသော ရထားလမ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ King, David C (2005). Kyrgyzstan. Marshall Cavendish, 144. ISBN 0-7614-2013-4။
↑ Escobar၊ Pepe (26 March 2005)။ The Tulip Revolution takes root။ Asia Times Online။
↑ "Kyrgyzstan – population". Library of Congress Country Studies. Template:PD-notice
↑ Flynn, Moya (1994). Migrant resettlement in the Russian federation: reconstructing 'homes' and 'homelands', 15. ISBN 1-84331-117-8။
↑ Kokaisl, Petr and Kokaislova, Pavla (2009). The Kyrgyz – Children of Manas. Кыргыздар – Манастын балдары. NOSTALGIE Praha, 132. ISBN 978-80-254-6365-9။
↑ Kirguistán la Iglesia renace con 600 católicos။ ZENIT (2 October 2008)။
↑ Religion in Kyrgyzstan။ Asia.msu.edu (4 March 2010)။ Archived from the original on2July 2007။2May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ&oldid=460309" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။